Famakiana Baiboly isan'andro kjv 14 Oktobra 2018 | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Drafitra famakiana Baiboly Famakiana Baiboly isan'andro kjv 14 Oktobra 2018
Ny famakiana Baiboly ataontsika isan'andro dia avy amin'ny bokin'ny Salamo 133: 1-3 ary ny Salamo 134: 1-3.
Ny Salamo 133 dia miresaka momba ny fitahian'ny firaisana, rehefa miaina ao anatin'ny tanjona miray isika amin'ny maha-mpino antsika dia afaka manome hery lehibe avy amin'ny tompo.
Miresaka momba ny fiderana ny Salamo 134, amin'ny maha-zanak'Andriamanitra izay mijoro eo anatrehany dia tsy maintsy miaina fiainana fiderana. Miderà ny Tompo anio, derao izy ao amin'ny fitoerana masiny ary mifalia amin'ny hatsarany.
Famakiana Baiboly isan’andro kjv
1 Indro, tsara sy mahafinaritra ny mpirahalahy miara-monina aminy! 2 Toy ny menaka manitra eo an-doha, izay mitsororoka amin'ny somotra, dia ny somotr'i Arona, izay midina amin'ny sisin'ny akanjony; 3 Tahaka ny ando any Hermona, ary tahaka ny ando izay midina any an-tendrombohitr'i Ziona, fa any no nandidian'i Jehovah ny fitahiana, dia fiainana mandrakizay.
1 Indro, misaora ny Tompo, ianareo mpanompon'ny Tompo rehetra, izay mitsangana amin'ny alina ao an-tranon'i Jehovah. 2 Atsangano ny tananao ao amin'ny fitoerana masina, ka misaora ny Tompo. 3 Hitahy anao avy any Ziona anie Jehovah Izay nanao ny lanitra sy ny tany.
Ray ô, misaotra ny teninao androany. Ny fidirana amin'ny teninao dia manome fahalalana, misaotra anao naneho ahy ny maha zava-dehibe ny firaisana sy ny fiderana ankehitriny. Ambarako fa hamoaka voa eo amin'ny fiainako amin'ny anarana Jesosy hoe Amen ny teny hoe Amen.
Nambarako fa mandeha amin'ny fanahin'ny fitiavana aho ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy
Amin'ny alàlan'ny herin'ny Fanahy Masina, ny Fitiavan'Andriamanitra dia mandalo ahy amin'ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy
Mpamorona vaovao aho, noho izany dia mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra na aiza na aiza alehako aho
Voatahy ao amin'i Kristy Jesosy aho ary mandeha amin'ny fahatsiarovako ny tso-dranoko
Androany ho ahy dia ho feno fankasitrahana amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratra31 vavaka no tondro ho fiarovana amin'ny fahavalo
Next lahatsoratraAndinin-Baiboly momba ny andro kjv 14 Oktobra 2018
Teboka vavaka hanoherana ny masquerades amin'ny nofy
Zava-bavaka 30 ho an'ny zazakely ao amin'ilay bibikely
Andinin-teny momba ny fanampiana mifanampy